I-Melon nezindawo zayo ezizuzisayo
Esihlokweni sethu esithi "ikhabe kanye nezakhiwo zalo eziwusizo" uzofunda: izindawo eziwusizo ze-melon yenyama yesifazane.
Okokuqala, kuyinto engavamile ngokweqile: okumnandi, ephunga, enomsindo - okumnandi. Futhi akunandaba ukuthi uyayidla ngesimo se-fresh noma upheke ukudla okusanhlamvu (amazambane ahlambulukileyo) - noma kunjalo kuyasiza. Okwesibili, uvala kahle ukoma. Okwesithathu, ngaphambi kokuba ungadli isidlo esingadliwayo: kwenzeka, ikhabe ibonisa umsizi omuhle ngezifo ezihlukahlukene.
Ngakho-ke, isibonelo, abantu, futhi manje ngisho nemithi yesayense ikhuthaza imfucumfucu ye-melon kumagciwane aphethwe yi-arteriosclerosis yemishini, i-rheumatism, i-gout. Futhi - njenge-anti-inflammatory noma expectorant. Ukuphulukisa impahla ye-pulp kuyosiza futhi ukususa i-helminths emzimbeni, amatshe amancane ezintsheni noma ngesinye isisu, nge-hemorrhoids, ukuqotshwa.
Laba besifazane abavame ukubhekana nezimo ezicindezelayo ngisho nokucindezeleka, kuvela, akudingeki ngokushesha ukuba basebenzise izidakamizwa ezinamandla zokwenziwa. Ukuze ubuyeke isimo sengqondo, ukuzolalisa isimiso sezinzwa esithukulule, ukuqeda ikhanda, futhi, kuvame ukusizwa yi-remedy elula kakhulu yasekhaya: inyama enomnandi, ngokwesibonelo, i-melon eqoshiwe. Ngendlela, i-fiber ithenda (nganoma yiluphi uhlobo) inomthelela omuhle emaphethelweni emathunjini, isebenza njenge-laxative futhi ilula kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, imbewu ye-melon, ebisiwe ebisi, idala (futhi ngaphandle kwesizathu) abaphulukisi baseRussia bayelulekwa ukuba bathathe lapho ukugcinwa kwamagciwane noma ukusola ngamatshe esithombeni.
Awukwazi ukubalwa ku-melon. Amaprotheni ngumakhi we-amino acid. I-carbohydrate ye-digestible kalula, i-acids ephilayo, i-pectin ne-nitrogenous substances. I-potassium ne-magnesium (ukusiza imisipha yenhliziyo), i-calcium ne-phosphorus (ukuqinisa isimiso se-musculoskeletal), insimbi (ithuthukisa i-hematopoiesis, izinqubo zokunciphisa okwenziwe nge-oxidation). Futhi mangaki ama-melon ase-pulp yamavithamini. I-thiamine, i-carotene ("ubuhle be-vitamin"), iqembu lonke le-B, i-ascorbic acid. Okokugcina, embewu - amafutha abalulekile. Njengoba bethi, yidla, kodwa ngesikhathi esifanayo - yenza ukuvimbela impilo yakho. Kuyoba nesifiso.
Izithelo (i-spherical elonged yellow-orange melon) iyasiza ekudleni okuluhlaza, okuphekwe, okomisiwe, okubandwetshiwe kanye nolwandle. Le melon iyoba ngcono kangcono uma ingadli esiswini esingenalutho, njengesibonelo, amaNgisi amaningi ngesikhathi sasekuseni, namahora amabili emva kokudla. Ngesinye isikhathi kukhona inqwaba ye "izithelo zepharadesi" odokotela abayincoma. Lokhu kungaholela ku-colic emathunjini, ama-spasms abuhlungu emaphethelweni emathunjini kanye nesifo sohudo.
Kunokuphikisana okuqinile. I-Melon kufanele ikhunjulwe ekudleni kwabantu abahlukunyezwa yisifo sikashukela, ngokweqile kakhulu, kanye nokungahambi kahle kwemifino kule mifino enempilo.
Geza izithelo. Yinqume zibe tincetu ezincane, ikhasi, indawo ephepheni bese woma izinsuku ezingu-10 efasiteleni, lapho ilanga lelanga liwela khona. Manje ukuthi izidakamizwa zokupheka-prophylactic zilungele, zingasetshenziswa njengoba kudingeka. Isibonelo, izingcezu ezomisiwe zelanga ziqinisa i-peristalsis, ebaluleke kakhulu, isibonelo, ngokuqothulwa kanye nokugcoba. Noma uthathe ukuvimbela (ukuvimbela) izifo zenhliziyo, ngoba ku-pulp ye-melon kuningi lwe-folic acid.
I-Melon ingumthombo wazo wonke amavithamini adingekayo namaminerali adingekayo empilweni ephelele yomuntu. Futhi ngakho-ke namuhla kusukela emanzini wejusi kwenziwa amafutha ahlukahlukene, imikhiqizo yezimonyo.
Ukusebenzisa i-baking soda ngobuhle bakho
Tonsils bese ubaphatha noma ususe
Ukuphumelela kokuhlanza isisindo sokulahlekelwa isisindo
Amakhambi omphakathi ngokumelene nokungalali
Ukuvimbela nokwelashwa kwama-hemorrhoids, izidakamizwa, izidakamizwa
Kunesiwashi esiwusizo se-Charcot
Ama-Burgers ane-shizi kanye nama-horseradish
U-Alyona Shishkova ubonise lokho akwenza khona ngo-6 ekuseni
Inkululeko kanye namathuba angenamkhawulo: imisindo yezemidlalo emisha Philips
Iphethini le-blouse elula ene-sleeve emfushane
Ukushintsha isimo sengqondo kuyingane: iseluleko kubazali
U-Ksenia Borodina wabonisa kuqala ubuso bendodakazi yakhe encane, isithombe
Ukupheka kwezitsha eziphakeme okumnandi kwekhalori
Ukuphazamisa ingane kusukela othandweni lokuqala
Sibheka ukubukeka: umnotho hhayi ngezindleko zekhwalithi
I-blepharitis esweni lomntwana
Ukupheka ikhekhe elimnandi kakhulu le-Easter, ukupheka okuhloliwe ngezithombe
Indlela yokuphatha i-adenoids emntwaneni?
Kuphi umbuthano wokunikeza ingane